Vana Chiremba Vachiri Muzvidzidzo Vokanda Mapadza Pasi muHarare nemuBulawayo
Zvita 24, 2007
Nzvimbo dzinosvikira varwere muzvipatara zvehurumende, dzinonzi dzavarwa zvichitevera kuramwa mabasa kwavana chiremba vachiri kudzidzira basa.
Vana chiremba ava vanoshandira muzvipatara zveParirenyatwa, Harare, Mpilo, ne United Bulawayo hospitals. Vanoti vari kuramwa mabasa zvichitevera kuderedzwa kwakaitwa mari dzavanotambira kubva pa 57 million kusvika pa 27 million dollars pamwedzi.
Asi svondo rapera, zvipatara zve Mpilo ne UBH, zvinonzi zvakatovhara nzvimbo dzinorapirwa varwere vachibva kumba (outpatient departments), zvichitevera kurega kuuya kumabasa kwavana chiremba ava. Vana chiremba ava vari kutsutsumwa nemari shoma dzavanotambira, pamwe nekushaya dzimba dzekugara.
Sangano ravana chiremba vemuzvipatara re Hospital Doctors Association, rinoti hapana charati ranzwa kubva kubazi rehurumende rinoona nezvehutano.
Zvinonziwo vamwe vana mukoti havasi kuenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa. Vana mukoti ava vanonzi vakaendesawo chiziviso chavo chekuda kuramwa mabasa, asi hazvisati zvava pachena kuti vose vakanda mapadza avo pasi here kana kuti kwete.
Mutori Carole Gombakomba weStudio7 aita hurukuro nemutungamiri wesangano re Hospital Doctors Association, Dr Amon Siveregi, kuti tinzwe kuti zvii zviri kuitika panyaya iyi.